August 15, 2019 AASYC Publications 0
Today is 14th August, marks the 29th assassination anniversary of U. Oo Thar Twan, We mourn today and he will never be erased from the history of Arakan and will always be remained in the deepest heart of the Arakanese people.
Even though the perpetrators have forgotten what they had done, the victims will not forget and forgive unless and until they (perpetrators) confess their wrongs deeds . It’s time to get justice of the assassination of Arakanese scholar,archaeologist,historian Saragree U. Oo Thar Twan by the the Burma’s oppressive regime of State Law and Order Restoration Council (SLORC) in 1990s .
U. Oo Thar Twan was killed by the oppressive Burmese SLORC regime in the Site-tway’s prison by putting poisonous chemicals in his food in the year of 1990.
While Burma is transforming towards the democracy ,the Transitional Justice(TJ) should not be forgotten . All the passed human rights abuses committed by the perpetrators should be confessed by the perpetrators in front of the nation and the voices and concerns of the victims must be heard and what they wanted to be. No victims should be left behind in this democratic reforms in Burma/Myanmar.
#Where there is #NoJustice there will be #NoSustainablePeace
#29thAnniversary #UOoTharTwanDay #ArakaneseScholarHistorianArchaeologist
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂတ်(စ်) ၁၄ ရက်နေ့သည် ဗမာ စစ်အာဏာရှင်များနှင့် ၎င်းတို့လက်ပါးစေများ၏ လုပ်ကြံမှုကြောင့် စစ်တွေအကျဉ်းထောင်တွင် ရခိုင်-မြန်မာ ပဏ္ဍိတ် ဆရာကြီးဦးဦးသာထွန်း ကျဆုံးခဲ့ရသည့် (၂၉) နှစ်မြောက် ဝမ်းနည်းအောက်မေ့ဖွယ်ရာ နေ့တနေ့ဖြစ်သည်။
ဆရာကြီး ဦးဦးသာထွန်းသည် ဗမာစစ်အာဏာရှင်များ၏ မတရား ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီး ထောင်ဒါဏ် (၃) နှစ် အပြစ်ပေးခံခဲ့ရသည်၊ ဆရာကြီးအား ထောင်ထဲတွင် ထမင်းကျွေးရာတွင် စိန် အစရှိသော အဆိပ်ပါသည့်အစာများအား နေ့စဉ်လိုလို အနည်းငယ် ထည့်ကျွေး လုပ်ကြံခဲ့ရာ ထောင်ကျပြီး (၅) လအကြာ (၁၉၉၀) ခုနှစ် သြဂတ်(စ်) (၁၄) ရက်တွင် စစ်တွေအကျဉ်းထောင်၌ ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ဆရာကြီး လုပ်ကြံခံရသော (၂၉) နှစ်မြောက် ဝမ်းနည်းအောက်မေ့ဖွယ်ရာ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် (၂၀၀၈) ခုနှစ်က မိမိတို့ ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားနှင့် လူငယ်များအစည်းအရုံး ( All Arakan Students’ and Youths’ Congress – AASYC ) မှ ထုတ်ဝေခဲ့သော ရခိုင်-မြန်မာ ပဏ္ဍိတ် ဆရာကြီးဦးဦးသာထွန်း၏ ကိုယ်ရေးအထ္ထုပ္ပတ္တိအကျဉ်း လက်ကမ်းစာစောင် (Pamphlet) အား ရခိုင်ပြည်သူများ နှင့် မြန်မာပြည်တဝှမ်းလုံးရှိ တိုင်းရင်းသားပြည်သူ အားလုံး သိရှိစေရန်အလို့ငှာ ပြန်လည်မျှဝေ ပေးလိုက်ပါသည်။
ရခိုင်-မြန်မာ ပဏ္ဍိတ် ဆရာကြီးဦးဦးသာထွန်း၏ ရခိုင်ပြည်နှင့် ရခိုင်လူမျိုး၊ ရခိုင်မျိုးနွယ်စုဝင်များအားလုံးအတွက် ပေးဆပ်စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံခဲ့မှုများအား လေးစားစွာ အလေးနီပြု ဂုဏ်ပြုပါသည်။
ဆရာကြီး ဦးဦးသာထွန်း ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေ။
Pamphlet အား အောက်ပါ Link တွင်ကူးညီနိုင်ပါသည်
Click the link to download the biography of U Oo Thar Twan
the 18th Anniversary of U U Thar Htwann’s Pamphlet (AASYC)
Confiscation of Public Properties, Obstruction of Press Freedom By Burmese Government
Arakanese Youth Injured After Being Shot by Burma Army Troops in Mrauk-U
IDPs နှင့် Refugee အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတရပ်အား AASYC ဗဟိုဌာနချုပ်ရုံးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်